Horay ma u haysataa tigidhada xafladaha muusiga Juulay? | Bezzia
Horay ma u haysataa tigidhada xafladaha muusiga Juulay?
Maria vazquez | 08/05/2022 22:00 | Wararka
Inta lagu jiro xagaaga fursadaha ku raaxaysiga muusiga tooska ah way bataan. Juqraafigayada oo dhan, the xafladaha muusikada midba midka kale raaco oo noo ogolaanaya inaan markhaati ka nahay dhowr maalmood gudahood riwaayadaha a tirada cajiib ah ee fanaaniinta. Bisha Luulyo oo kaliya, ilaa sodon ciid ayaa dalkeena laga qaban doonaa. Horay ma u haysataa tigidhadaada mid ka mid ah xafladaha muusiga ee Juulay?
2 meeraha dhawaaqa
4 iid sonic
Bilbao BBK Live waxay soo noqotaa ka dib muddo dheer oo ay ku jirtay tamar cusub iyo dareenka dib u midoobida la filayo maalmaha. Luulyo 7, 8 iyo 9 ee Kobetamendi. Boodhka Bilbao BBK Live 2022 ayaa ka muuqan doona joogitaanka in ka badan 100 fanaaniin ah; laga bilaabo xiddigaha quduuska ah ilaa ballamo kor u kaca, xoojinta farshaxannimada badan, astaanta xafladdan.
Dabaaldeggu wuxuu yeelan doonaa sida madax-weyneyaal LCD Soundsystem, J Balvin, Dilaagayaasha, Wiilasha Dukaanka Xayawaanka, Stromae, Dhexdhexaad, MIA iyo Placebo. Waxaa lagu daray magacyo caalami ah sida Kelly Lee Owens, WOS, Romy ama Nilüfer Yanya iyo safiirro ka socda goobta gobolka sida Zahara, Rigoberta Bandini, Alizzz, Cariño, Caribou, Venturi, Axolotes Mexicanos, LR iyo Depression Sonora, iyo kuwo kale oo badan. .
Weli waxaad haysataa wakhti aad ku iibsato kaaga qiimihiisu yahay €155 xafladan oo la wada sugayey. Tikidhada maalinta sidoo kale waxay diyaar u yihiin € 60 maalin kasta oo xafladda ah, beddel wanaagsan, shaki la'aan, si aad ugu raaxaysato fanaaniinta aad jeceshahay.
Bandhiga Planeta Sound, oo laga sameeyay stardust-ka ku hareeraysan kooxda El Bierzo oo ah dabbaaldeggii ugu horreeyay ee madax-bannaanida muusikada ee Ponferrada, ayaa xaqiijiyay inay ku laaban doonto garoonka Colomán Trabado Stadium. 15, 16 iyo 17 Luulyo.
kooxo badan oo ah muusiga isbaanishka galaxy sida La MODA, Lori Meyers, Sidonie, Carlos Sadness, Recicled J, Dorian, Alizz ama Ladilla Rusa, iyo kuwo kale, ayaa ciwaan uga dhigaya daabacaadan cusub ee xaflada kaas oo ay wali jiraan tigidhada la heli karo.
Mar dambe ma awoodi doontid inaad iibsato tigidhada maalinta, laakiin tigidhada xilliga guud ee €66 taas oo kuu ogolaan doonta inaad ku raaxaysato fanaaniinta badan ee ka soo muuqda boodhka xaflada sanadkan 2022. Ha sugin wakhti dheer si aad u iibsatid haddii kale waad dhammaan doontaa!
FIB ayaa lagu qaban jiray Benicàssim sanad walba tan iyo 1995. Kadib hakadkii uu sababay masiibada, xafladan ayaa mar kale marti galin doonta inta u dhaxaysa July 14 iyo 17 degmada Valencian "dadwaynaha nasasho la'aanta ah ee dhaqamada kala duwan ee muusikada".
Sannadkan waxa lagu soo bandhigi doonaa xafladda fanaaniinta caalamiga ah aasaasay oo soo baxay kuwaas oo xaaqaya jaantusyada muusikada sida Kasabian, Justice, Two Door Cinema Club, Mando Diao iyo Boys Noize Nathy Peluso, The Kooks, Becky Hill, Tusaale, Tyga, Tom Grennan, Hunna, Tom Walker, Declan Mckenna, Steve Aoki, Frequencies Lumay ama Joel Corry.
Waxa kale oo jiri doona meel FIB ah oo loogu talagalay fanaaniinta indie ee goobta Isbaanishka ugu quseeya waqtigan. Marka lagu daro magacyada maalinlaha ah sida Love of Lesbian, IZAL, Zahara, Viva Sweden, Lori Meyers, La MODA, Dorian, Miss Caffeina iyo La Cámara Roja, soo jeedinta kale ee soo ifbaxa ayaa lagu dari doonaa sida La La Love You ama Cariño
Wali waad heli kartaa tigidhada iyo tigidhada maalinta ee waxa ka mid ah dabbaaldegyada muusiga ee ugu muhiimsan Julaay. Maanta mime wuxuu bedelay qiimaha tigidhada; Waxaad ka hubin kartaa qiimayaasha cusub mareegta xaflada.
Bandhiga Sonica 2022 oo lagu qabanayo magaalada Cantabrian ee Castro-Urdiales bishii Luulyo 15 iyo 16 Wuxuu kuu soo jeedinayaa maalmaha fasaxa ah si aadan u joojin dheesha. Bandhiga ayaa ka muuqan doona kooxo madax banaan oo heer qaran ah oo leh qaabab muusig oo kala duwan sida C. Tangana, La MODA, Viva Sweden, Carolina Durante ama Rigoberta Bandini, iyo kuwo kale.
Ma doonaysaa in aad ka mid noqoto dadka ku raaxaysanaya bandhig faneedkan tooska ah? Kaadhadhka bixiya gelitaanka goobta xaflada Julaay 15 iyo 16, 2022 waa waxaa lagu heli karaa €64. Haddii aad doorbidayso tigidh maalinle ah, waxaad ku heli kartaa €39.
Bandhiga Hoose wuxuu ku soo laaban doonaa Benidorm Luulyo 29-31, 2022 oo leh muusik madax-banaan oo heer qaran iyo heer caalami ah. Isku soo wada duuboo xafladda ugu dhameystiran ee aagga Levante, waxay bixisaa saddex maalmood oo xeeb ah, qorrax iyo muusig toos ah oo ku yaal aag ka badan 30.000 m2.
Sannadkan waxaad ku raaxaysan kartaa bandhigyada tooska ah ee Benidorm in ka badan 70 fanaaniinta dhagaxa ah, pop iyo eletrooniga. Metronomy, Nathy Peluso, Primal Scream, Izal, Amaia, Carolina Durante, Temples iyo fanaaniin kale oo badan ayaa dhawaan ku biiray magacyo cusub: Tifaftirayaasha, Dorian, Lewis OfMan, Chico Blanco, Dora, Bifannah iyo Reigning Sound. qaado kaaga tigidh saddex maalmood ah oo ah €125 ama sharad maalinta tigidhada €35.
Ma waxaad tagaysaa xaflad Julaay? Haddii aadan weli haysan tigidhadaada xafladaha muusiga Luulyo oo aad xiisaynayso mid ka mid ah, ha ku qaadan waqti aad u dheer inaad iibsato kaaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Horay ma u haysataa tigidhada xafladaha muusiga Juulay?
5 faa'iido oo Collagen u leedahay timaha